Dowladda Kenya oo Soomaaliya u aqoonsatay dal cadoow ku ah – Somali Top News
Dowladda Kenya oo Soomaaliya u aqoonsatay dal cadoow ku ah
February 17, 2019 Somali Top News	0 Comments
Dowladda Kenya waxay sheegtay in dalka Sonalia oo ay deriska yihiin dhinaca Waqooyi inay u aqoonsadeen Dowlad caddow ah, kadib, markii ay xaraashtay xuduud-baddeedka Kenya ee ay ku jiraan Shidaalka iyo Gaaska Dabiiciga, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Hadal-qoraal oo ay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Kenya soo saartay ayaa lagu sheegay in Shirkii London ka dhacay bishan 7-dii ay Somalia ku soo bandhigtay Khariidad muujinaysa qeyb ka mid ah xuduud-baddeedka ay Somalia iyo Kenya ku murunsan yihiin,
Qoraalka Dowladda Kenya waxay kaloo ku sheegeen inay Kenya u diyaarsan tahay inay difaacaan Xuduudahaeeda wax kasta ha ku qaadatee iyo dadka ku lug leh Arrimahaasi.
Hadalka Dowladda Kenya waxaa kaloo lagu sheegay inay Shidaalka ay DFS xaraashtay ay iibsadeen waxa ay ku sheegtay Shirkado ka kala socda daalalka Britain iyo Norway, iyagoo xusay inuu Ra’isul-wasaaraha Somalia yahay Muwaadin haysta dhalashadda dalka Norway, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kale, Dowladda Kenya waxay u yeeratay Danjirihii ka joogay Somalia, Lukaas Tumbo, waxayna Danjirha Somalia u jooga Kenya, Maxamed Axmed Nuur Tarzan ku amartay inuu dib ugu laabto.
← Ciidamada Dowladda iyo Al shabaab oo ku dagaalamay dagmada Qaryooleey
Ciidamada amaanka Puntland oo ka hor tagay weerar u qorsheysnaa Al shabaab →
Booliska Itoobiya oo xabsiga dhigay Madaxweynihii hore dowlad deegaanka Soomaalida
Ra’iusl Wasaare Kheyre iyo Wefdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Riyaadh
Hay’adda UNHCR oo ka digtay sameynta abaaro ku dhufta Soomaaliya
June 5, 2019 Somali Top News 0